Xiaomi သည်ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်အမြန်ဆုံးတိုးတက်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် Androidsis
ယနေ့ စျေးကွက်တွင်အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အရေးပါဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှာ Xiaomi ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းပြိုင်ဘက်များနှင့်အတူစားသုံးသူများ၏လေးစားမှုနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုရရှိနိုင်ရုံသာမကအခြားစျေးကွက်များကဲ့သို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအမြင်ကိုလည်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်တိုးတက်မှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Samsung, Huawei, LG, Oppo နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများထက်သာလွန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ငါတို့ပြီးသားငါတို့ပြောပြီ Huawei သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖုန်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်အက်ပဲလ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးဆမ်ဆောင်းရဲ့ခြေဖနောင့်အပေါ်တွင်မူ၎င်း၏တိုးတက်မှုလျင်မြန်စွာအချိုးအစားမှာ Xiaomi နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပါ။
ယခုနှစ်Aprilပြီနှင့်ဇွန်လကြားဘဏ္theာရေးအစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များအရယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ၄၈.၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာကြားခံ ၂၁.၄ သန်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ဆိပ်ကမ်းပေါင်း ၃၁.၉ သန်းကိုပေးပို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည် Sony ကရရှိသောဆင်းရဲသောစွမ်းဆောင်ရည်.
Xiaomi သည်ဤနည်းအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါကလာမည့်နှစ်များ၌ Samsung, Huawei နှင့် Apple တို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Xiaomi သည်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲpရာမအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကသေးသေးလေးတစ်ခုက Huawei ပဲ။ ယခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင်တယ်လီဖုန်းပေါင်း ၃၈.၅ သန်းကိုပေးပို့ရာမှ ၅၄.၂ သန်းသို့ရောက်ရှိပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်မှု ၄၀.၉% ရရှိခဲ့သည်။ Samsung နဲ့ပါသို့သော်ထိုကုမ္ပဏီများအတွက်အဆင်ပြေလျှင်သူတို့၏ရောင်းအားသည် ၁၀.၄% ကျဆင်းသွားသည်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည်မိုဘိုင်းဖုန်း ၇၁.၅ သန်းကိုအခြားမည်သည့်ဖုန်းများထက်မဆိုပို့နိုင်ခဲ့သည်မှာတောင်မှထိုကိန်းဂဏန်းများသည်လုံးဝမကောင်းကြောင်းကိုမဖော်ပြနိုင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည်ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်
သင်၏ Android မိုဘိုင်းအတွက် Notorious 99 နှင့်၎င်း၏ 100 player arena ပါသော "Battle Royale" ပိုများပါသည်